ब्लेजर वा अमेरिकी? - भिन्नता र प्रत्येक कपडा कसरी लगाउने | स्टाइलिश पुरुषहरू
एलिसिया टोमेरो | 11/06/2022 11:55 | व्यक्तिगत हेरचाह, फेसन, प्रचलनहरू
उहाँ जस्तो ब्लेजर, ज्याकेटको रूपमा ब्लेजर, साझा छ समान अर्थ, तर वास्तवमा प्रत्येकको एक विशेष अवधारणा छ। सर्तहरू जुन प्रत्येकलाई सम्मानित गरिएको छ तिनीहरूको इरादा छ, इतिहासभरि र तिनीहरूको विकासको कारणले गर्दा, तिनीहरूको आफ्नै नाम बोकेको डिजाइन सिर्जना गरिएको छ।
के तपाइँ ब्लेजर वा ज्याकेट बीच छनौट गर्न आवश्यक छ? दुबैमा के फरक छ? माथिको दृश्य गर्दै हामी साना विवरणहरू फेला पार्न सक्छौं जुन आज हामी अनगिन्ती स्टोरहरूमा पहिचान गर्न सक्छौं। भिन्नता आधुनिक र अधिक अनौपचारिक बीचको छ, र बीचमा सुरुचिपूर्ण र औपचारिक।
हामीलाई ब्लेजर वा ज्याकेटको वर्णन गर्न सामान्य नामको रूपमा ज्याकेट शब्द थाहा छ। यसको उत्पत्ति ए बाट पुन: वर्णन गरिएको छ परम्परागत इङ्गल्याण्ड सिलाई, जहाँ पछि अमेरिकामा निर्यात गरियो र यसमा अमेरिकानाको नाम जोडियो।
यो ध्यान दिनुपर्छ कि ज्याकेट यी दुई नामहरूलाई दिइएको शब्द हो। आज यो हामीलाई थाहा छ, तर इङ्गल्याण्ड मा जन्म जहाँ पछि निर्यात गरिएको थियो अमेरिकामा उनको डिजाइन। त्यहाँ यसलाई एक अद्वितीय र औपचारिक कपडाको रूपमा निर्माण गर्न थाल्यो र जहाँ अमेरिकानाको नाम दिइएको थियो। यो ध्यान दिनुपर्छ कि केहि ज्याकेट डिजाइनहरू एक टुक्रामा सिर्जना गरिएको छ।
1 ब्लेजर वा अमेरिकी?
अद्वितीय रूपमा यो व्यक्ति र क्षण मा निर्भर गर्दछ। जसमा प्रयोग गरिनेछ। हामीले पहिले नै संकेत गरिसकेका छौं, ब्लेजर धेरै सुरुचिपूर्ण छ, तर यसमा त्यो स्पोर्टी टच छ। ज्याकेट धेरै सुरुचिपूर्ण छ र घटना वा क्षण मा निर्भर गर्दछ जुन यो प्रस्तुत गर्न जाँदैछ।
ब्लेजर र ब्लेजर यी दुई अवधारणाहरू छन् जुन वर्षौंको लागि ठाउँमा छन्, यद्यपि हामीले सधैं ज्याकेट वा ब्लेजर लगाएका छौं। विवरण र भिन्नताहरू यसको सामानहरू र कपडाको कटमा फेला पार्न सकिन्छ र हामी यसलाई तल निर्दिष्ट गर्दछौं।
ज्याकेट एक धेरै औपचारिक पोशाक हो। यो XNUMX औं शताब्दीको अन्त्यमा इङ्गल्याण्डमा जन्मिएको थियो र फ्रक कोटको स्कर्ट काटेर सिर्जना गरिएको थियो। यसरी ज्याकेट बनाइन्छ बोक्न धेरै सजिलो, अधिक कार्यात्मक र भव्यता गुमाउनु बिना।
XNUMX औं शताब्दी मा यो सिर्जना गरिएको थियो थप अनुकूलित ज्याकेट को नामको साथ "सूट ज्याकेट" र कुलीन ब्यू ब्रुमेललाई धन्यवाद (ब्रुमेल अत्तरले उसको मुद्रित फिगर बोक्छ) उसको फेसन विस्तार हुन्छ किनकि ऊ त्यो समयमा फेसन बेन्चमार्क बन्छ।
अंग्रेजी आप्रवासीहरू जैकेटको यो शैली पनि थाहा पाउनुहोस्। तिनीहरूले केही परिवर्तनहरू गर्छन्, तीनवटा बटनहरूमध्ये दुई मात्र छोडेर र यसमा भएको एकल खोललाई कपडाको प्रत्येक छेउमा थप दुईवटा कार्यात्मक खोलहरूले प्रतिस्थापन गर्दछ।
स्पेनमा यो ज्याकेट मोडेल आइपुग्छ XIX शताब्दी र यो पहिले नै अमेरिकी ज्याकेटको रूपमा बप्तिस्मा लिइएको छ, यसको उत्पत्ति दिइएको छ। यसको औपचारिक शैली बाहिर खडा छ, संग दुईवटा गाढा बटन र फ्ल्याप पकेटहरूको प्याकेट। यो अमेरिकी ज्याकेट प्यान्टसँग मिलाउन र यसरी सूटलाई औपचारिक बनाउन डिजाइन गरिएको हो।
यो एक विशेष र औपचारिक कार्यक्रम को लागी आदर्श पोशाक हो, जस्तै टूर्नामेंट वा उत्सव। यस प्रकारको कपडा पहिलो बटन जोडिएको साथ लगाउनको लागि उपयुक्त छ। यद्यपि हामीले यसलाई प्यान्टको साथमा औपचारिक कपडाको रूपमा फिट गरेका छौं र तिनीहरू मिल्न जान्छन्, हामी यसलाई व्यक्तिगत रूपमा र केही अनौपचारिक रूपमा पनि प्रयोग गर्न सक्छौं, यसलाई चिनियाँ प्यान्ट वा जिन्ससँग मिलाएर।
यो छ नौसेनाबाट यसको उत्पत्ति यस डेटाबाट हामी यसलाई वर्गीकृत गर्न सक्छौं कि यो केहि अधिक खेलकुद हो। यो पनि सुरुचिपूर्ण छ, तर थप आकस्मिक स्पर्श संग। यसको शुरुवातमा यो बोक्ने द्वारा प्रतिष्ठित थियो धातु बटन र प्याच जेबहरू। तिनीहरूमध्ये केहीले छातीको खल्तीमा कुनै प्रकारको चिन्ह बोकेका थिए र इङ्गल्याण्डमा क्रिकेट प्रतियोगिताहरूमा लगाउनु पर्ने लुगाको चिन्ह थियो।
XNUMX औं शताब्दीमा इङ्गल्याण्डकी महारानी भिक्टोरियाले अमेरिकी जैकेटमा आधारित ज्याकेट बनाउन चाहन्थे, जहाँ यो धेरै प्रतिरोधी कपडाहरु संग सिर्जना गरिएको थियो, उही कट र प्याच जेब संग। यस शैलीमा हामी देख्न सक्छौं कि यो धेरै स्पोर्टी र आकस्मिक छ।
20 मा, ब्लेजर फैशनेबल भए, जहाँ सेतो प्यान्टको साथ उनको संयोजन बाहिर खडा भयो। आज हामी तिनीहरूलाई कुनै पनि प्यान्ट, सामान्यतया स्लिम शैली, कुनै पनि रङमा र जीन्सको साथ संयोजन गर्न सक्छौं। सक्छ थप अनौपचारिक रूप सिर्जना गर्नुहोस्.
यी दुई ज्याकेटहरू छलफल गर्न, धेरै पक्षहरू औंल्याउन आवश्यक छ। तिनीहरू धेरै सरल विवरणहरू छन् जहाँ अमेरिकी अधिक औपचारिक छ, अँध्यारो बटन प्ल्याकेट र फ्ल्याप जेबको साथ। यो सामान्यतया प्यान्ट संग जान्छ। तैपनि, ब्लेजर अधिक आकस्मिक छ, धेरै प्रतिरोधी कपडा र प्याच जेब संग। तिनीहरू अधिक अनौपचारिक रूपमा लुगा लगाउनका लागि उपयुक्त छन् र तिनीहरू जीन्सको साथ उपयुक्त छन्।
तपाईं हामीलाई हाम्रो मा पढ्न सक्नुहुन्छ "3 प्रकारका ब्लेजर लगाउने विचारहरू" र भित्र "क्लासिक ब्लेजरहरूको साथ एक सुरुचिपूर्ण छवि कसरी प्रोजेक्ट गर्ने"।
लेखको पूर्ण मार्ग: स्टाइलिश पुरुषहरू » व्यक्तिगत हेरचाह » ब्लेजर वा अमेरिकी?
पुरुषहरूको लागि साइडबर्नका प्रकारहरू